बिष्णु पौडेलको भण्डा*फोर गर्दै बाघ झैँ गर्जिए ज्ञानेन्द्र शाही ! चोरलाई पनि कारबाही भएनन् Gyanendra | Public 24Khabar
Home News बिष्णु पौडेलको भण्डा*फोर गर्दै बाघ झैँ गर्जिए ज्ञानेन्द्र शाही ! चोरलाई पनि...
बिष्णु पौडेलको भण्डा*फोर गर्दै बाघ झैँ गर्जिए ज्ञानेन्द्र शाही ! चोरलाई पनि कारबाही भएनन् Gyanendra
भारतको गुजरातमा भएको एक घटनाले त्यहाँका मानिसहरु अचम्ममा परेका छन् । सो घटनाले प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने हरफलाई सत्य सावित गरेको छ । विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवै राजीखुशी थिए तर अचम्मत तब भयो जब दुलाहाका बुबा र दुलहीकी आमा बेपत्ता भए ।
विवाहको एक हप्ता अगाडि नै दुलाहाका बुबाले सम्धीनी भगाएपछि उनीहरुको बिहे स्थगित भएको छ । बेहुलाका ४८ वर्षीय बुबा व्यापारी हुन् भने बेहुलीकी ४६ वर्षीया आमा राजनीतिक पार्टीकी कार्यकर्ता हुन् ।
Previous articleपैसाका लागि आफ्नै आमाको ८० बर्षको बिदेशीसँग बिहे गराईदिए ! झोला बोकेर आएका ज्वाईँ कार चढेर निस्किए
Next articleविप्लपको शक्ति प्रदर्शन ! भारतीय दलाल ओली भन्दै हल्लाए माइतीघर, भारतलाई सिधै चेत*वानी